BUDDHIST TERMS' Dictionary: LAY DEVOTEE - ဥပါသက၊ ဥပါသိကာ
LAY DEVOTEE - ဥပါသက၊ ဥပါသိကာ
LAY DEVOTEE Upᾱsaka, Upᾱsikᾱ
ဥပါသက - ဥပါသကာ၊ ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ ယောက်ျား။
ဥပါသိကာ - ဥပါသိကာမ၊ ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ အမျိုးသမီး။
ရတနာသုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သဖြင့် သရဏဂုံ တည်သူမှန်သမျှ ကြီးငယ်မဟူ အမျိုးသားများကို ဥပါသကာ၊ အမျိုးသမီးများကို ဥပါသိကာမ ဟုခေါ်သည်။
A male devotee who takes refuge in the Three Gems, is an Upᾱsaka.
A female devotee who takes refuge in the Three Gems, is an Upᾱsika.
All male devotees, old and young alike, are called upᾱsakas, and all female devotees, old and young alike, are called upᾱsikᾱs.